Nada, iyo critique yekusaenzana kwenzanga uye kushungurudzwa mudzimba | Zvazvino Zvinyorwa
Nada inoverengeka nemunyori anozivikanwa wechiSpanish Carmen Laforet, akapihwa Mubairo weNadal muna 1945 (gore rimwe chetero rakaburitswa). Mutambi mukuru muchikamu ichi ndiAndrea, mudzidzi wepayunivhesiti achangosvika pamba pehama muBarcelona. Ikoko, protagonist inotarisira kupedzisa kosi yake yekudzidzira uye kutamira kune kwake kuzvimiririra.
Asi inzvimbo izere nekutambudzika panguva yeFranco mushure mehondo. Neichi chikonzero, dzimwe hama dzake dzaimbove dzakapfuma dzinoratidza zvakakomba matambudziko epfungwa uye, nekudaro, kugarisana kunova kunopokana. Pakupedzisira, musikana anemukana wekukunda misungo yese iyi nekuda kwerutsigiro rweaanodzidza navo kukoreji.
1.1 Udiki nehudiki
1.2 Iri rinoshamisa basa rekunyora
1.3.1 Mamwe mazita anozivikanwa mune rekunyora basa raCarmen Laforet
2 Hapana Kuongorora
2.1 Nhoroondo uye mamiriro
2.2 Maumbirwo uye zvinyorwa
Carmen Laforet Díaz akaberekwa musi waSeptember 6, 1921 muBarcelona, ​​Catalonia, Spain. Ndiye aive dangwe remuchato pakati pemugadziri wechiCatalan uye mudzidzisi anobva kuToledo. Muna 1924, mhuri yake yakatamira kuGran Canaria nekuda kwemabasa ababa vake (Akanga ari mudzidzisi wevashandi vemaindasitiri).
Vanun'una vake Eduardo naJuan vakaberekerwa imomo, vaakaramba aine hukama hwakanaka muhupenyu hwake hwese. Akadzokera kuBarcelona paakashandura makore gumi nemasere kuti adzidze Philosophy uye Tsamba, kutanga, pamwe nemutemo gare gare. Zvisinei, hapana kana mamwe emadzinza maviri akapedzwa.
Iri rinoshamisa basa rekunyora
Mushure mekusvitsa makore makumi maviri nerimwe, Carmen mudiki akatamira kuMadrid. Ari ipapo akasangana nemunyori wezvekunyora Manuel Cerezales, uyo akamukurudzira kunyora. Nenzira iyoyo, Laforet akaburitsa bhuku rake rekutanga muna 1945, Nada, akarumbidzwa zvakanyanya uye akapa Mubairo weNadal. Kune rimwe divi, naCerezales akange akaroora pakati pa1946 na1970, vaviri ava vaive nevana vashanu.
Muna 1948 akagamuchira musiyano weRoyal Academy, zvese kwekutanga kwake uye kune akamutsiva, Fastenrath Mubayiro. Muchokwadi, mukati memakumi matatu emakore anotevera ebasa rake rekunyora akaunganidza mibairo mizhinji nemitero. Izvo zvakaenderera mushure mekufa kwake, kwakaitika muna Kukadzi 28, 2004, kuMajadahonda (Nharaunda yeMadrid), nekuda kweAlzheimer's.
Kunze kweavo vataurwa Nada y Fastenrath Mubayiro, munyori wechiCatalan akahwina iyo Menorca Novel Prize uye iyo National Literature Prize ye Mukadzi mutsva (1955). Uye zvakare, Laforet akagadzira muunganidzwa wakakura wenoverengeka uye nyaya pfupi. Akangomira kunyora paakatanga kutambura nematambudziko ekurangarira nekuda kwehutano hwake, hwaakabva paruzhinji.
Mamwe mazita anozivikanwa mune rekunyora basa raCarmen Laforet
­­Chitsuwa nemadhimoni (1950). Novel.
Iko kumisikidza (1963). Chekutanga chikamu cheiyo trilogy Matanho matatu kunze kwenguvandokuteverwa Nepachikona (2004) uye Checkmate (isina kubudiswa).
Tsamba kuna Don Juan (2007). Muunganidzwa wenyaya dzake pfupi.
Romeo naJuliet II (2008). Muunganidzwa wake ese ezvinyorwa zverudo.
Analysis of Nada
Unogona kutenga inoverengeka apa: Nada
Nhoroondo uye mamiriro
Amai vaCarmen Laforet vakafa makore mashoma mushure mekubereka vanakomana vavo vaviri. Gare gare, baba vemunyori vakaroorazve mukadzi izvo zvakakonzera kunetsa chaiko kwemukadzi mudiki wechiCatalan. Nechikonzero ichi, vazhinji vevamiriri vevanyori veBarcelona inherera (Andrea futi).
Zviripachena, Hondo Yenyika uye kudzvinyirira kwaFranco kunoonekwa zvakare mukuvandudzwa kweiri basa. Nenzira imwecheteyo, iri bhuku rinotsanangura kusangana kwepfungwa dzevechidiki mukutarisana nekuora kwenzvimbo yavo. Uyezve - semamwe magwaro na Laforet- munyori anoratidzira chiono chake chechikadzi kuwedzera kune kwake maonero pakutenda.
Maumbirwo uye zvinyorwa
Nada ingano yakakamurwa kuita zvikamu zvitatu zvakasiyana zvakajeka:
Inovhara zvitsauko gumi zvekutanga. Inotaurira nezvekuuya kwaAndrea muBarcelona kuzotanga zvidzidzo zvake zvepamusoro. Pamwe chete, mugwagwa uye imba yemhuri yake zvinotsanangurwa (izere neumbozha munguva yakapfuura, mune ino nzvimbo inoodza moyo). Zvakare nehunhu hweanogumbuka mavara anogara imomo; nhaurirano (zvimwe zvine njodzi) uye zvinokatyamadza chingwa chezuva nezuva.
Babamunini vake chete vaRomán (violinist) vanoita kunge vasingafarire nyaya dzevamwe vanhu. Zvishoma nezvishoma, Andrea anonzwa kudiwa kwekuzvitsaura kubva pahupengo hwese hwaanogara. Naizvozvo, anoshandisa nguva yakawanda kuUniversity, kwaanowana shamwari nyowani, pakati pavo, anobatana kunyanya naEna nemaPons. Chikamu chino chinopera nekutamisirwa kwatete Angustias kuenda kumonisita.
Inoenda kubva muzvitsauko 11 kusvika ku18, umo matambudziko anowedzerwa. Nharo mumhuri yemhuri dzinova dzinosemesa uye dzine chisimba, zvichikonzera Andrea kurara husiku. Uye zvakare, akafunga kubhadhara chete kwechingwa chamangwanani kuti agadzirise zvirinani mari yake. Asi izvi zvinoreva kuziya nenzara nguva nenguva.
Andrea, kana asiri mukirasi, anoshandisa yakawanda nguva yaanogona kudzidza muraibhurari. Zvichakadaro ari kuwedzera boka rake reshamwari uye anokumbira Ena kuti arege kuenda kumba kwake, kunyangwe mushure mekunge protagonist achinja pfungwa. Kunyange zvakadaro, Hukama husingazivikanwe hunomuka pakati paEna naSekuru Román, panguva imwechete inotanga kufambidzana kwaPons naAndrea. (Kunyangwe hukama uhu husingazobudirire munguva yakareba)
Inosanganisira kubva muchitsauko 19 kusvika kumagumo (25). Andrea anotanga kuenderana naamai vaEna, avo vaive neyakavanzika nhoroondo naRomán. Panzvimbo yakakosha yenyaya, Ena anozivisa kuna Andrea chinangwa chake chechokwadi: kunyadzisa muRoma kutsiva kwekusiya amai vake. Mune mhedzisiro, Ena anoenda kunogara kuMadrid neRoman anozviuraya nebanga.
Quote naCarmen Laforet.
Kuenda kumagumo, Tete Gloria (avo vakashungurudzwa nemurume wavo, Juan) vanoshanyirwa nehanzvadzi dzavo. Uyezve, vakadzi ivavo naJuan vanopedzisira vapomera Gloria murombo kuti ndiye honzeri yematambudziko mumba, kusanganisira kufa kweRoman. Iyo novel inovhara naAndrea achionekana nehama dzake dzese. Anoenda kuMadrid, akokwa neshamwari yake Ena uye aine chivimbiso chebasa.
Carmen Laforet anoratidzira pa Nada akasiyana maonero ekuona nezve kusaenzana kwenzanga kuburikidza nehukama hwehunhu hwayo (Ena, anobva kumhuri yakapfuma, naAndrea). Kutsiva ndechimwe chinangwa munhoroondo, chakasimbiswa naEne uye chakapedzwa nerufu rweRoma. Iko hakuna zvakare kushomeka kwerudo kuodzwa mwoyo uye zvinonyengera zvirongwa.
Zvisinei, chinhu chinotyisa kwazvo che Nada ndiko kunyunyuta kwakazara kwekushungurudzwa mudzimba kwakaitwa naGloria. Zvakanaka - sezvazvinoitika muzviitiko zvakawanda chaizvo - anofumura kuomarara kunodiwa kwenhengo dzemhuri, nekuti Juan anongotsvaga zvikonzero zvekumurwisa nekuda kwematambudziko ake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » marudzi » Novela » Nada, naCarmen Laforet
Yakatsanangurwa tsananguro yeruzivo. Ini ndinoda mafomati epeji rino nekuti inosimudzirawo nyaya yemunyori.